Nwere ike igwu Audible si Waze mgbe ị na-anya ụgbọala | Gam akporosis
Dị ka Spotify, ugbu a, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ahụmịhe ahụ nụ na Waze na-enweghị mkpa ịhapụ ngwa ahụ. A ozi ọma na-abịakwute anyị taa na nke ahụ maka ndị nwere ndenye aha na ọrụ akwụkwọ ọdịyo a, na n'ezie ụgbọ ala, bụ ihe na-atọ ụtọ karịa.
Ihe mma karịa na ndị jams ma ọ bụ congested okporo ụzọ dị ka na-eme na obodo dị ka Madrid ma ọ bụ Barcelona, ​​Anam Udeme Audible pọdkastị ma ọ bụ audiobooks mgbe anyị na-akwọ ụgbọala; ya mere anyị nwere ike iji ọkara ọkara elekere ma ọ bụ karịa ga-aga njem ọ bụla.
una Audible na-aga ike na ogo ọdịnaya kedu ka nke a bụ Gen-Dro na Alaska na ndị ọzọ, ma ugbu a na-eweta ahụmịhe ya na otu Waze. Audible esonyerela na Waze Audio Player Mmemme iji nyefee ahụmịhe ọdịmma bara ụba.
Ma ọ bụ na ụgbọala ahụ bụ ohere ebe egwu, colloquia ma ọ bụ pọdkastị na-abụkarị ndị isi, dịka akwụkwọ ọdịyo ndị ahụ sitere n'aka Harry Potter nke Audible. Audible na-enye site na ndenye aha ya karịrị 90.000 audiobooks na pọdkastị nke mere na isiokwu na oge ndị ahụ oge ụfọdụ na-agaghị echefu echefu na-agaghị efu.
Site na ngwa Waze anyị ga-pịa akara ngosi egwu ka ịhọrọ Audible dị ka ọkpụkpọ egwu. Dị ka ọ bụrụ anyị na-eje ije na ngwa Audible na mkpanaka gam akporo anyị Mgbe anyị na-anya ụgbọala, ntụzịaka Waze ga-apụta na ya ka anyị nwee ike ije n’ụzọ anyị n’enweghị nsogbu ọbụla.
Site taa ị nwere ike ibudata Waze iji nụ ụtọ ọdịnaya niile nke Audible site na nkasi obi nke ugbo ala gi ma ghara ịhapụ ngwa n'oge obula.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Waze abanyelarị Audible ka inwee akwụkwọ ọdịyo na pọdkastị gị n'aka